CCTV Jir dil ka dhacay Villa Soomaaliya & Shaqaale loo xiray | Keydmedia
CCTV Jir dil ka dhacay Villa Soomaaliya & Shaqaale loo xiray
Ilaa afara ruux ayaa loo xiray soo bandhigidda muuqaal carro badan dhaliyay oo lagu baahiyay baraha bulshada kaasoo laga soo duubay madaxtooyada Soomaaliya.
MUQDISHO, Soomaaliya - Saacadihii la soo dhaafay waxaa baraha Bulshada qabsaday muuqaal nin lagu magacaabo Qaamuus oo ay qaraabo yihiin Madaxweyne Farmaajo oo xoog ku jiiraya mid ka mid ah baraha laga hubiyo madaxtooyada iyo ciidamada ilaalada ah oo dagaal gacan ka hadal dhex maraya.
Muuqaalkaan ayaa laga arkayay Qaamuus oo si aad ah u bahdilayo ciidamada ilaalada ah, isagoona diidaya in la baaro, islamarkaana adeegsanayo awoodda xigtanimo ee madaxweynaha, taasoo ilaalada albaabka madaxtooyada ka careysiisay.
Macluumaad ay heshay Keydmedia Online ayaa lagu ogaaday in ilaa afar ruux oo ay askartii ilaalada aheyd ku jiraan loo xiray kiiskaan, kuwaas lagu eedeynaya baahinta muuqaalkaan baraha bulshada qabsaday, inkastoo aan la hubin in afarta ruux wadayihiin ciidamadii is hor istaaga ku sameeyay Qaamuus.
Waxaa la yaab noqotay in ninkii amar diidada sameeyay ee la sheegay in uu qaraabada la yahay madaxweyne Farmaajo aanu tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadin, balse la xiray dadkii bogga u garaacday jebinta sharciga.
Inkasta oo xilliyadii hore madaxweyne Farmaajo lagu xaman jiray inuusan xigaalo iyo qabiilo si gaar ah u qadarin, hadana dadka sida aad ah ula socda arrinta ka dhacday madaxtooyada ayaa sheegaya in sababta qofkii mudnaa in tillaabada laga qaado uu howshiisa sida caadiga ah ugu wato, dad kalana loo xirayo ay tahay arrin la xariirta xigtanimo.
Arintaan ayaa imaaneyso xilli dhamaadka bishii July ee sanadkaan ay taliyaal ciidan oo kasoo jeeda beesha Madaxweynaha oo fulinaya amarka Xoghayihii KMG ee xafiiska Ra’iisul Wasaaraha oo ay isku jufa ahaayeen ay si xoog ah kula wareegeen gaari uu lahaa Yaxye Cali Hareeri inkasta oo goor dambe gaarigii lasoo celiyay.